Fintonic inobatsira iwe kubata yako yemari mari | IPhone nhau
Fintonic inobatsira iwe kubata yako yemari mari
Zvikumbiro zvekutonga zvemumba zvinoshandiswa mufashoni. MuApp Store mune maapplication asingaverengeke anowanikwa, mamwe acho anowana zvibodzwa zvakakwirira kwazvo muongororo dzemamwe mablogiki. Kunyangwe zvese izvi, handisati ndamboona kushandiswa kwerudzi urwu rwekushandisa maunofanirwa kuisa mari yako nemaoko, pamwe nekuti ini handizvione ndichigona. Zvakadaro rimwe zuva ndakamhanyira mukati Fintonic, iko kunyorera kunotora yako yese mari uye zvaunoshandisa otomatiki, uye ndakakurudzirwa kuyedza.
Izvo zvese zvaikonzerwa nechikumbiro kubva kumuteereri kune yedu podcast, uyo akatikumbira kuti tiongorore chikumbiro uye, pamusoro pazvose, kupa maonero edu nezve chimwe chehunhu hwayo hwakakosha: kuwana maakaundi ako ebhangi uye unganidza yako data rese. Chokwadi, naFintonic haufanire kunetseka nezvekupinza mari yako kana mari, nekuti inowana maakaunzi ako uye anokuitira iwe. Kamwe kusavimba kwekutanga pakakundwa uye mushure mekuverenga zvakawanda nezvenyaya iyi, ndakafunga kuiyedza, uye kazhinji ndinofanira kutaura kuti degree rangu rekugutsikana rakakwira.
1 Kuchengetedzwa pamberi pezvose
2 Ruzivo rwese rwuri muruoko rwako
4 Kukoshesa kwedu
Kuchengetedzwa pamberi pezvose
Zviripachena chinhu chekutanga chaunofunga ndechekuti hausi kuzopa mapassword kumabhengi ako maakaundi kuchikumbiro. Chekutanga pane zvese, ini ndakatsvaga ruzivo rwuripo pawebhusaiti yekushandisa uye pane mamwe mapeji kwayakaongororwa. Panguva dzese zvinovimbiswa kuti kuchengetedzeka kwakanyanya uye izvo ivo vanokwanisa chete kuwana yako data, vasina kuwana kune mamwe mashandiro. Chaizvoizvo kana isu tichida kuita oparesheni tinofanirwa kugara tichisaina siginecha kana kushandisa kadhi kodhi uye kusimbisa neSMS, saka haifanire kunge riri dambudziko. Asi zviri pachena kuti iwe unofanirwa kupa vhoti yekuvimba kuchikumbiro, uye izvo zvinoenderana neimwe neimwe.
Ruzivo rwese rwuri muruoko rwako
Kuchengetedza kunoisa padivi peapp yacho kwakanaka chaizvo. Ruzivo irwo rwaunokupa runoshamisa. Wakajaira (yakaipa) yepamutemo mashandiro emabhangi, kugona kuona ruzivo rwese rwakakamirwa mumhando dzemashandisirwo, nehuwandu, huwandu hwezvinodhura, uye fungidziro zvinonakidza chaizvo uye unoona mashandisiro aunoita mari yako, danho rekutanga kuna ndinogona chengetedza chimwe chinhu. Notification system, zvese nharembozha uye email, zvinokuzivisa iwe kana kufamba kukaitika. Asi chakanyanya kundishamisa isystem yekutsvaga kwayo. Chero ani akambotsvaga chinzvimbo anenge aona kuti akagadzirwa zvisina kunaka sei mapeji ewebhu emabhangi, uye kunyanya maficha ekushandisa.
Iko kunyorera kwapera nemazano ekuti iwe ungachengeta sei: kana uine akawanda emabhangi makomisheni anokupa rairo ekuchengetedza, kana kana iwe wakabhadhara yakawanda kune chimwe chinhu chinoratidza dzimwe nzira. Ini ndinofungidzira kuti idzi nhoroondo dzichava izvo Fintonic inogadzira bhizinesi rayo, nekuti kune rimwe divi iko kushanda kwakasununguka zvachose, pasina kutenga kwe-mu-app uye pasina kushambadzira.
Kana kupa rako rebhangi ruzivo hakusi kukukanganisa iwe, saka Fintonic ndiko kunyorera. Ruzivo irwo rwunopa harugone kuve rwakazara kana kuratidzwa zvirinani, uye irubatsiro rwakakura kwete chete kudzora mashandisiro ako pasina kana kufunga nzira dzinogona dzekuchengetedza.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPad » Fintonic inobatsira iwe kubata yako yemari mari
Ini ndinosarudza kuchengeta maaccount angu neMoneyWiz uye kwete kupihwa zvese, pamwe nekuwiriranisa mugore remidziyo yese kubva mac kuenda kuiphone uye ipad, chinoshamisa.
Fintonic inoita kunge inoshamisa kwandiri. Ndanga ndichishandisa kunyorera kwezana remakore (kunyangwe paingova webhu chete), uye ndiyo izere pamusika pasina kupokana. Ini ndinovada ivo kuti vandipe zvese.Zvaitwa, ndine maakaundi akati wandei akavhurwa uye nezviziviso zveFintonic ndakatozvidzivirira pamadhora akawanda (anokuudza kana inishuwarenzi yapfuudzwa kwauri, semuenzaniso, uye kana usina mari mu account, iwe unopinda uye unzvenga kugara mune iyo tsvuku), duplicate risiti yealam yekumba uye, pandakaona mari yandaibhadhara mumakomisheni pagore, ndakaenda neapp kubhengi ndikakwanisa kutora maviri kadhi kugadzira…. Nhasi izvi zvinongoitwa fintonic; uye shamwari dzakasununguka.
Aya ndiwo gumi nematanhatu emoji emoji yeApple Watch